Posted by: chhepyastra weekly | मे 7, 2011
माओवादी आपनो दायित्व पूरा गर्न प्रतिबद्ध छ
दीनानाथ शर्मा, प्रवक्ता- एनेकपा -माओवादी
० मन्त्रिमण्डल विस्तारमा तपाईंको पार्टीले सिफारिस गरेका मन्त्रीहरूले नै सपथ ग्रहण गरेनन् नि, यसको कारण के होला ?
हाम्रो पार्टीबाट सरकारमा महिलाको तर्फबाट ३३ प्रतिशत सहभागिता भएन भन्ने एकजना माननीयको भनाइरहेको छ । अर्का एक साथीले मधेसका मुद्दा सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्ने कुरा उठाउनु भएको छ । यस सन्दर्भमा कतिपयको व्यक्तिगत असन्तुष्टिहरू पनि देखापरेका छन् र पनि यो समस्याको समाधान छिट्टै हुन्छ ।
० माओवादी पार्टीभित्र नै मन्त्रिमण्डलमा सहभागी हुादा भागवन्डा मिलेन भनेर चर्को विवाद बाहिर आइरहेको छ नि ?
यो हाम्रो पार्टीको लागि दुःखको कुरा हो । पार्टीमा त्यस्तो हुनुहुन्थेन, जे भयो, त्यो गलत छ ।
० माओवादी पार्टीले भर्खरै मात्र शान्ति र संविधान निर्माणको बाटोमा लाग्ने निर्णय गरेको छ, के तपाईंहरूले अब जनविद्रोहको कार्यक्रम त्यागेकै हो त ?
हाम्रो पार्टी शान्तिप्रक्रियामा आएदेखि अहिलेसम्मको कार्यदिशा भनेको शान्ति र संविधान नै हो । शान्ति र संविधान सुनिश्चित भएन भने यसका विरुद्ध कसैले षड्यन्त्र गर्यो भने नेपाली जनताले त्यसको विरुद्ध विद्रोह गर्छन् । त्यसको नेतृत्व एकीकृत माओवादीले गर्छ । हामी जनताले गर्ने विद्रोहको लागि नेतृत्व दिन तयार हुनुपर्छ । बाह्रबुादे सहमतिदेखि अहिलेसम्मको हाम्रो यात्रा भनेको शान्ति र संविधानकै यात्रा हो । शान्ति र संविधानको यात्राबाट माओवादी पार्टी विचलित भएको होइन ।
० तपाईंहरू शान्ति र संविधानको लागि कहिलेसम्म कुर्नुहुन्छ त ?
शान्ति र संविधान निर्माणको लागि सबैभन्दा ठूलो पार्टी हुनुको नाताले हामी बढी जिम्मेवारीका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ । यो हाम्रो केन्द्रीय समितिको पछिल्लो निर्णय पनि हो । अन्य दलहरूले शान्ति र संविधानको कुरा गरेको हुनाले उनीहरूले शान्ति र संविधानलाई सुनिश्चित गर्ने दिशामा पहलकद्मी गर्छन् कि भनेर हामीले बाटो हेरेका थियौ तर अन्य पार्टीहरू नेपाली जनताले आशा गरेअनुसारको शान्ति र संविधानलाई सुनिश्चित गर्ने दिशातर्फ नलागेपछि अब हामीले बढी जिम्मेवारीबोध गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा हाम्रो पार्टी पुगेको छ । बाकी रहेको छोटो समयमा पनि हाम्रो अन्तिम प्रयास शान्ति र संविधानको लागि नै केन्दि्रत गर्ने योजना बनाएका छौ । हामी, अहिले त्यही दिशामा अगाडि बढिरहेका छौ ।
० संविधान जारी हुने भनिएको दिन जेठ १४ आउन अब २० दिन पनि बाकी छैन, योबीचमा शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रियाले पूर्णता पाउने सम्भावना देखिएको छैन । यस्तो अवस्थामा तपाईंहरू कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ ?
समय थोरै छ, तैपनि राजनीतिक सहमतिको आधारमा जेठ १४ को समस्यालाई राजनीतिक निकास दिन सकिन्छ । जेठ १४ आउादैमा आकाशै खस्ने, पाताल नै डुब्ने भन्ने हुादैन । त्यसलाई राजनीतिक सहमतिको आधारमा निकास दिन सकिन्छ । त्यो निकास भनेको संविधानसभाले अहिलेसम्म गरेका कामकारवाहीहरूको मस्यौदा संविधान जनताको अगाडि सार्वजनिक गरेर दिन सकिन्छ । सहमतिमा पुग्न बााकी रहेका विषयहरूमा राजनीतिक सहमतिको आधारमा समाधान गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ । सेना समायोजनलगायत शान्ति प्रक्रियाका बाकी रहेका कामलाई व्यवस्थित रूपले अगाडि बढाउने काम गर्नुपर्छ । त्यसको लागि राजनीतिक दलहरूबीच सहमति बन्न सक्यो भने निकास निकाल्न सकिन्छ ।
० तपाईंकै पार्टीका नेताहरू यो सरकारले शान्ति र संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई पूर्णता दिन सक्दैन, काग्रेसलगायत मधेसवादी दललाई समेत मिलाएर सहमतिको सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने अभिव्यक्तिहरू दिइरहनुभएको छ नि ?
यो सरकारलाई नै राष्ट्रिय सहमतिका सरकारको रूप दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो नेताको भनाइ हो । यस सरकारमा नेपाली कााग्रेसलगायत मधेसवादी दलहरूसमेत सहभागी भएर अहिले तत्कालको राजनीतिक संकटलाई निकास दिने प्रयास गर्नुपर्छ । त्यसबाट मात्र अहिलेसम्म जनताले संघर्ष गरेर प्राप्त गरेका उपलब्धिलाई रक्षा गर्दै अघि बढ्न सकिन्छ । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्न नसके पनि दलहरूबीच र राजनीतिक सहमतिबाट मुलुकलाई निकास दिनुपर्छ भने ध्येयका साथ ती विषयहरू अगाडि आएका हुन् ।
० पार्टी सरकारमा सहभागी भए पनि जनअपेक्षित काम गर्न सकिरहेको छैन नि ?
सरकारले भर्खरै मात्र पूर्णता पाएको छ । यसले भर्खरै मात्र आˆनो कामकारवाहीहरू अगाडि बढाएको छ । सरकार जादा-नजादै काम भएन भन्न त मिल्दैन । सरकारले कसरी आˆनो कामकारवाही अगाडि बढाउाछ, त्यो हेर्न बााकी नै छ । यो सरकारले शान्ति र संविधानलाई सुनिश्चित गर्नको लागि, आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण गर्नको लागि जनअपेक्षाहरूलाई पूरा गर्न, महागी नियन्त्रण गर्न, लोडसेडिङ घटाउन, बेरोजगारी समस्यालाई कमसेकम न्यूनरूपमा भए पनि नियन्त्रण गर्नको लागि भर्खरै बनेको सरकारले के-कति काम गर्छ, त्यो हेर्दै जानुपर्छ ।
० माओवादीले अब छिट्टै सेना समायोजन र संविधान निर्माणको सन्दर्भमा ठोस योजना ल्याउने बताएको छ, त्यो योजना कस्तो हुन्छ, केही बताइदिनुस् न ?
अब आउने योजना पनि शान्ति र संविधानलाई सुनिश्चित गर्ने गरी नै आउने हो । सेना समायोजनको लागि पनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र योजनाअनुसार नै कार्यक्रम आउाछ । सबैले प्रतीक्षा गरेको आगामी जेठ १४ को निकास के हुन सक्छ भन्ने ’boutमा हाम्रो पार्टीको ठोस योजना ल्याउने भनेर अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभएको छ । केही दिनभित्र त्यो कार्ययोजना बाहिर आउाछ ।
० अहिले माओवादी पार्टीभित्र केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्म गुट, उपगुट सिर्जना भएको देखिन्छ नि, यस विषयमा के भन्नुहुन्छ ?
लोकतन्त्रमा विचार, आस्थाहरू फरक-फरक हुन सक्छन् । अहिले हाम्रो पार्टीले दलीय प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार गरेको छ । विभिन्न विचारहरूलाई खेल्न, फुल्न देऊ भन्ने मान्यताको आधारमा पार्टी अगाडि बढिरहेको छ । एउटा राम्रो फूलबारी हुनुको लागि त्यहाा विभिन्न रङ्गीचङ्गी फूलहरू हुनुपर्छ । त्यसपछि मात्र फूलबारीले सुन्दरता पाउाछ । त्यसकारण एउटा पार्टीभित्र पनि विचारको विकासको लागि विभिन्न विचारहरू आउनु स्वभाविक हो, त्यसलाई अन्यथा मान्न सकिादैन । पार्टीभित्र विचारको आधारमा विचार समूहहरू पनि स्वभाविक रूपले जन्मिन्छन्, त्यसलाई स्वाभाविक मान्नुपर्छ । पार्टीले फरक विचार राख्न पाउने अनुमतिसमेत दिएको छ । हाम्रो पार्टीको केही समय अगाडि भएको स्थायी समितिको बैठकले विभिन्न विचार, समूहको विचारहरूलाई पार्टीभित्र चलखेल गर्न दिने, प्रतिस्पर्धा गर्न दिने र प्रतिस्पर्धामा श्रेष्ठता कायम गर्न कसैलाई अवरोध सिर्जना नगर्ने भनेका छौा । हाम्रो पार्टीभित्र अधिकतम जनवादको अभ्यास भएको छ भन्ने अर्थमा यसलाई बुझ्नुपर्छ । विचार समूहहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो, दमन गरियो भने त्यसको परिणाम स्वभाविकरूपमा राम्रो आउादैन । यो कति ठीक, कति बेठीक भन्ने’boutमा हामी पछि मूल्यांकन गर्छौं ।
० माओवादी नेताहरूमाथि अहिले पद र पजेरोको पछि लागेको आरोप लागेको छ नि, यस विषयमा के भन्नुहुन्छ ?
माओवादी पार्टी जोगीहरूको पार्टी होइन, यो सन्त-महन्तहरूको पार्टी पनि होइन । यो समाजलाई सम्पूर्णरूपमा रूपान्तरण गरेर अगाडि जानुपर्छ भन्ने मान्यता बोकेको पार्टी माओवादी पार्टी हो । काठमाडौ सडकमा पैदल हिाडेर काम गर्नुपर्छ भन्ने आग्रह पुरातनवादी आग्रह हो । समयसापेक्ष अगाडि बढ्नुपर्छ । हिजो भूमिगत कालमा एउटा मिटिङ गर्न उनान्साठी दिनसम्म पनि हामी हिाडेका थियौ । अहिलेको वस्तुगत स्थितिले गाडी चढ्नुपर्ने भएको छ । गाडी चढ्ने भन्ने कुरा गर्नु पिछडिएको मानसिकता हो । एकीकृत माओवादीका नेताहरू आवश्यक पर्दा पद त्याग्न पनि सक्छन्, गाडी, सुविधा त्याग्न पनि सकिन्छ, आवश्यक पर्दा त्यसको उपयोग राम्रोसाग गर्न पनि जान्दछन् ।
० भन्नाले नेपाली क्रान्तिलाई पूर्णतामा पुर्याउन माओवादी अझै पनि दृढ संकल्पित छ भन्न खोज्नुभएको हो ?
हो, राष्ट्रिय अभिभारा एकीकृत माओवादीको काधमा मात्रै छ । यो समाजलाई रूपान्तरण गर्ने, परिवर्तन गर्ने दायित्व पनि हाम्रै काधमा रहेको छ । हामी आˆनो जिम्मेवारी पूरा गर्न दृढ छौ । हामीबाट राष्ट्र र जनताले ठूलो आशा गरेको छ । इतिहासले समयको जिम्मेवारी पूरा गर्न हामी इमानदारीपूर्वक प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । आफूलाई केन्द्रमा राखेर होइन, राष्ट्र र जनतालाई केन्द्रमा राखेर माओवादी आˆनो दायित्व पूरा गर्न प्रतिबद्ध छ ।
० अन्त्यमा थप केही भन्न चा हनुहुन्छ ?
विगतदेखि नै यस क्षेप्यास्त्र साप्ताहिकले शान्ति, संविधान र लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नको लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ । यसले निरन्तररूपमा आˆनो ऐतिहासिक अभिभारा पूरा गरोस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु ।